वामदेवलाई सदन लाने यस्तो छ प्रचण्डको भित्री कारणः काठमाण्डौमा आलोचना भए पछि सुनसरीतिर नजर ! |
15:24:48 | banner मुख्य समाचार राजनीति राष्ट्रिय
काठमाण्डौं / नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले पार्टीसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि नेता वामदेव गौतम सोही ठाउँबाट चुनाव लड्ने तयारी भएको छ । नेता गौतमलाई सदन पु¥याउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विशेष पहल रहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको चासो र वामदेवको सदन छिर्ने चाहनाको विषयमा राजनितिक वृतमा ठूलो वहस पनि भईरहेको छ ।
एमाले–माओवादी एकिकरणमा बामदेवले महत्वपूण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । एकिकरण अघि पनि उनी प्रचण्डसँग निकट मानिन्छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने राजनीतिक अभ्यास गरिएको एकाथरिको बुझाई रहेको छ भने अर्का थरी भने पद लोलुपको संज्ञा दिदै आएका छन् ।
‘प्रचण्ड र वामदेवको सम्बन्ध निकै लामोसमय देखिको भएको जानकारहरु बताउछन् । विगतमा बामदेव माओवादीमा प्रवेशको तयारीबो चर्चा पनि निकै आएको थियो । उनले प्रचण्डलाई ठूलो गुन लगाएको र त्यो यस बेला प्रचण्ड तिर्न चाहेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड वामदेवलाई गुन लगाउन र आफू नजिक रहेको देखाउन पनि चाहेका छन् ।
वामदेवलाई सदन लैजानका लागि यसअघि डोल्पा, दैलेख, बैतडी, बाँके र नवलपरासीलगायतका जिल्लाका सांसदलाई राजीनामा गराउने प्रयास भएको थियो । तर सफल भएन । पछिल्लो समय काठमाडौं–७ का रामवीर मानन्धरले भने गौतमका लागि सिट खाली गर्न उत्सुकता देखाए पछि गौतमको सदन छिर्ने बाटो खुलेको हो । बाटो खुले पनि काठमाण्डौबाट जित्न सहज भने नभएको टिप्पणीहरु आईरहेका छन् । पछिल्लो निर्बाचनमा काठमाडौं– ७ बा६ १८ हजार १ सय २ मत प्राप्त गरी मानन्धर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी राप्रपाका बिक्रम थापाले १० हजार ७९ मत पाएका थिए। मतान्तर धेरै भएको क्षेत्र भएकाले यहाँबाट वामदेवलाई जिताउन सकिने आंकलन प्रचण्डको छ। तर महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यशैलीले महानगरवासी रुष्ट भएका छन् । नेकपालाई जनताले विश्वास नगर्ने वातावरण बनिसकेको एक थरी कार्यकर्ताहरुले बताउदै आएका छन् । उनको यात्रा चुनौतीपूर्ण भएको विश्लेषण हुदै आएको छ ।
काठमाण्डौमा समस्या हुने विश्लेषण हुन थाले पछि अन्य क्षेत्रको विकल्प पनि खोजी भईरहेको श्रोतले बताएको छ । नेकपाले एक स्थानमा मात्र जितेको सुनसरी क्षेत्र नं. १ मा बामदेवलाई सहज हुने पनि चर्चा हुन थालेको छ । संघीय समाजवादी र नेपाली काङ्ग्रेसबाट उठेका अशोक राईलाई दोव्वर मतले हराएर नेकपा एमालेबाट युवा नेता जयकुमार राई विजयी भएको क्षेत्र हो । उनले ४४ हजार मत ल्याएका थिए । अशोक राईको २२ हजार मत आएको थियो । धरान उपमहानगरपािलका र केही बराहक्षेत्र र रामधुनी नगरपािलकाकाे क्षाेत्र सुनसरी १ मा पर्छ । धरान उपमहानगरका मेयरकाे पिन गत साउन १ मा निधन भएकाले मेयरका लागि निर्वाचन हुदैछ ।
तर यस्तो सम्भावना नरहेको सांसद जयकुमार राई बताउछन् । उनले भने–‘जनताको अवमुल्यन गर्नु हुदैन् । सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना भईरहेका बेला चुनाव पार्टीलाई घातक हुन सक्छ । जनताको विश्वास जित्ने काम पहिले गर्नु पर्दछ ।’
अढाई बर्ष पछि प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषयमा ईश्वर पोखरेल के भन्छन ?
नेकपाको शुभकामना आदान–प्रदान